Xukuumadda Somaliland Oo la wareegtay 9 Maxbuus oo budhcad badeed Soomaali ah | Somaliland.Org
Xukuumadda Somaliland Oo la wareegtay 9 Maxbuus oo budhcad badeed Soomaali ah
March 28, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)- Xukuumadda Somaliland, ayaa markii ugu horreysay maanta la wareegtay 9 qof oo ka mid ah 19 xubnood budhcad-badeeda soomaali ah oo lagu xidhayo xabsiyadda magaaladda Hargeysa, kuwaasi oo laga keenay dalka Seychelles.
Sidaasi waxa sheegay Wasiirka wasaaradda Caddaaladda Somaliland, Md Axmed Xuseen Caydiid, oo u waramayay BBC-da, waxaanu tilmaamay in maxaabiistan ay xukuno ku rideen maxkamaddaha dalka Seychelles ay maanta kala wareegay, si xukunadooda hore loogu xukumay ay ugu dhamaystaan xabsiyadda Somaliland.
Wasiirku waxa kale oo sheegay inay sagaalkan nin ka mid yihiin sagaal iyo toban maxbuus oo budhcad-badeed Soomali ah oo lagu helay budhcad-badeed oo muddaba ku xidhnaa dalka Seychelles oo iyagu iskood u qabtay oo soo codsaday inay xukunkooda ku dhamaystan Somaliland xabsiyadda ku yaala.
Xidhiidhayaha xafiiska ka hortaga budhcad-badeeda u qaabilsan Somaliland Md Maxamed Cismaan ayaa isaguna dhiniciisa ka sheegay in maxaabistan Soomaaliyeed ee budhcad-badeeda ah ee loo soo wareejiyey xabsiyadda Somaliland ay maxkamaddaha Seychelles ku rideen xukuno u dhexeeyey 10 sanno ilaa 24 sanno sannadihii 2010-2011.
Xidhiidhiyuhu waxa uu inta ku daray in maxaabistan hay’addaha qaramadda midoobay u qaabilsan la-dagaalkanka danbiyadda ee UNODS ay u soo duulisay garoonkan diyaaraddah ee Cigaal Internationl Airport magaaladda hargeysa uu maanta kula wareegay wasiirka caddaaladda Somaliland qaybtii ugu horreysay ee sagaalka ah.
Sida uu sheegay xidhiidhiyaha xafiiska ka hortaga budhcad-baddeeda u qaabilsan Somaliland Maxamed Cismaan dhamaanba maxaabistan budhcad-badeeda soomaaliyeed ee loo soo wareejinayo Somaliland waxay u dhasheen koonfurta Soomaaliya oo aanay ku jirin Puntland.
Sida laga warqabana Madaxweynaha Somaliland iyo Madaxweynaha Seychelles ayaa bishii February ee sannadkan heshiis ku saabsan wareejinta maxaabistan budhcad-badeeda ah oo Somaliland loo soo wareejinayo ee ku jira xabsiyadda Seychelles waxay ku kala saxeexdeed magaaladda London.
Previous PostMadaxweynaha Oo Magacaabay Wasiirka Boosaha iyo 4 masuul oo kaleNext PostWasiirka Maaliyadda oo kormeer Kedis ah ku tegay goobaha ilaha dhaqaalaha ee magaaladda Berbera	Blog